I-Morph kwiTikTok: Icebo lokucoca ulwelo elitsha kwiTikTok | XperimentalHamid
I-Morph kwiTikTok: Icebo lokucoca ulwelo elitsha kwiTikTok
Ngamana 4, 2021 by USasha Gohar
Umkhwa weTikTok uyamangalisa kangangokuba uya kuthatha umphefumlo wakho. Ibizwa ngokuba yiMorph kwiTikTok.
I-TikTok kuphela kwesicelo esinakho ukubandakanya abantu kwiqonga laso ixesha elide. Isinika ukhetho olubanzi lweevidiyo ezimfutshane. Ngaba uqaphele ukuba uhlala uskrolela kwaye uskrole ngaphandle kwesiphelo xa uvula le app?
Yiyo le nto eyenza iTikTok yongeze ngokumangalisayo kwimithombo yeendaba esele ikho ngokuthanda i-Instagram kunye ne-Snapchat.
Ntsikelelo Ngcobo on TikTok:
Yintoni iMorph kwiTikTok?
Ungayisebenzisa njani i-Morph kwiTikTok?
Ukuba ufuna ukwazi ngale app, uze endaweni efanelekileyo.
Kule posi, ndiza kukuxelela ukuba yintoni le icebo lokucoca ulwelo. Ndiza kuchaza iindlela ezininzi zokucoca isihluzo kumxholo olayishwe usetyenziso. Okokugqibela, ndiza kuba neakhawunti eneenkcukacha zokuba ungayisebenzisa njani le nto.
Nje ukuba uyiqonde yonke into ukuze ube nakho ukusebenzisa le filter kwiividiyo zakho. Ke masiqale ngaphandle kokuqhubeka.
Kule minyaka sibona izihluzi ziguqukela. Ekuqaleni, izihluzi zazingeyonto ngaphandle kwendlela yokuphucula umgangatho weefoto kunye neevidiyo ngokutshintsha imibala kunye nokungafani kweefoto.
Kodwa namhlanje, izihluzi zinokwenza okungaphezulu kokucaphuka ngemibala kunye nokungafaniyo ukuphucula umgangatho weefoto kunye nevidiyo.
Abantu okwangoku babona iifilitha ezininzi ezintsha ezimangalisayo kangangokuba abantu bazisebenzisa ziphindaphinda.
Xa sithetha ngeefilitha zokunxibelelana ezimbini zonxibelelwano zentlalo ziza engqondweni, ezizezi, iTikTok kunye neSpapchat.
I-Snapchat inayo zonke iifilitha ezimangalisayo kodwa iTikTok ikwakhona ngokukhawuleza okukhulu. Singalinganisa indima yeTikTok ekwaziseni iifilitha ezintsha ngokujonga isihluzi seMorph.
Sisisihluzo esiza kukushiya umangalisiwe. Ihamba isuke ebusweni bomntu iye komnye iye ngendlela emangalisayo. Nje ukuba uyisebenzise kwividiyo yakho kwiTikTok, kunzima ukuxela ukuba yenziwa ngumntu oqhelekileyo.
Yindlela yokuhluza eguquke kwixesha elidlulileyo: banika abantu amandla okulunga ekuhleleni iividiyo zabo. I-Morph kwiTikTok ngumzekelo omnye.
Ukuba ungumsebenzisi weTikTok osebenzayo, yazi nje ukuba ungazifaka njani iziphumo kunye neefilitha kwiividiyo zakho. Kuya kufuneka uyazi ukuba ezinye zeempembelelo kunzima ukuzisebenzisa kunezinye.
Abantu banengxaki yokusebenzisa i-Morph kwiTikTok. Kudala befuna impendulo kwaye ndizimisele ukungqina. Ke, uyenza njani i-TikTok ye-Morph?
Ukufaka isihluzo se-morph kwiividiyo zakho kwi-TikTok kuya kufuneka uye kwi-TikTok app. Nje ukuba uvule usetyenziso, kuya kufuneka ucofe uphawu '+' phantsi kwesikrini.
Xa ulapho, uya kubona izinto ezintathu emazantsi kwesikrini sakho, ezizezi, ii-60s, 15s, kunye neetemplate zeFoto.
Cofa kwiitemplate zemifanekiso kwaye ugcine uskrolela de ufumane isihluzo se morph. Nje ukuba uyifumane, kuya kuba lula ukuyisebenzisa kuyo nayiphi na ividiyo okanye useto lweefoto ozifunayo.
Apha unokufunda elinye inqaku Utyando lwe-Jaw TikTok
Isihluzi seMorph kwiTikTok sizenzela igama kwiTikTok. Ayisiyiyo loo nto kuphela, abantu bebesebenzisa iividiyo ngale nto nakwezinye iisayithi zonxibelelwano.
Kule posi, ndikuxelele malunga nefuthe le-Morph. Ndikuxelele ukuba uyifumana njani iFree sefa morph kwiTikTok.
Ngoku ukuba uyifundile le posi, ndiyathemba ukuba uya kuba nakho ukusebenzisa le filter ngokulula.
iindidi I-Tiktok tags Ungayenza njani i-Morph yeTikTok, Yintoni i-Morph kwiTikTok Post yokukhangela
Noluyolo TikTok: new Trend on TikTok
Iflash kwiTikTok: Uyisebenzisa kanjani iFlash engaphambili kwiTikTok